Uwuhlalutya njani umsebenzi we-SEO? Iingcebiso ezi-6 ezivela kwiingcali zeSemalt
Iinjini yokukhangela zizilo ezingaqondakaliyo. Onogada bamasango anamandla e-intanethi, kufuneka baqinisekise ukuba bazisa kuphela eyona nto iphezulu kunye neziphumo ezifanelekileyo kubasebenzisi babo, hleze batyhalele ecaleni kwezinye iindlela ezingcono.
Ukuze uhambise iziphumo zokukhangela ezisemgangathweni, i-injini yokukhangela kufuneka iqinisekise ukuba eyona algorithm bayisebenzisayo ukukhangela ihlala iyimfihlo egadwe ngokusondeleyo. Emva kwayo yonke loo nto, ukuba umbutho ubusazi eyona fomyula banokuthi bayixhaphaze ukunyuka imigangatho.
Kwiphepha lokubaleka, iinjinjini yokukhangela kufuneka zinike i-webhusayithi uphawu lwento eza kubanceda ukuba babekwe kakuhle, kungenjalo, wonke umntu uya kuba ebaleka engaboni. Njengokulungelelanisa iinjinjini zokukhangela njengeGoogle, Yahoo! kunye ne-Bing inikezela ngezikhokelo zokwenza uphendlo lweinjini yokukhangela (SEO)-uluhlu lweempawu ezabelana ngazo zonke iiwebhusayithi ezikwinqanaba eliphezulu.
Kwaye ezi ziimpawu ezenza isiseko sohlalutyo lwe-SEO.
Kutheni ndifuna ukuhlalutya ukusebenza kwe-SEO yam?
Uyakhile iwebhusayithi. Ulandele imigaqo esisiseko yophando lweinjini yokukhangela. Ubeke indawo yakho kwi-ether. Kutheni ufuna ukuhlaziya ukusebenza kwe-SEO?
Kukho izizathu ezibini eziphambili.
Okokuqala, ulwazi ngamandla. Ngokuqinisekileyo, inokuba uyakhe iwebhusayithi yakho 'ngencwadi', kodwa awuyazi ngokunyani ukuba iyenza kakuhle kanjani de uyivavanye. Kungenzeka ukuba uyisebenzise kakuhle iwebhusayithi yakho ngokugqibeleleyo, kodwa abakhuphisana nawe bakwazile ukuzenzela ezabo ngcono, kwaye usemnye umsebenzi ekufuneka wenziwe. Ngokuhlalutya intsebenzo yakho ye-SEO unokuchonga iindawo eziphambili zokuphucula, kwaye ugqithise kudlulileyo abakhuphiswano bakho kwizikhundla.
Okwesibini, i- SEO ikwimeko yokutshintsha rhoqo. Ukuqhubekeka ukuphucula umgangatho weziphumo zabo kunye nokuhlala inyathelo elinye phambili kwiiwebhusayithi, uGoogle, Yahoo! kwaye i-Bing ihlala ilungisa ialgorithms zazo. Oku kuthetha ukuba into ekwenze ukuba ube kwinqanaba eliphezulu kwizikhundla kwiveki ephelileyo ayinakukufikelela apho kule veki. Ukuba uthelekisa eyona misebenzi ilungileyo yanamhlanje ngokuchasene neyona ndlela ibalaseleyo kwiminyaka eli-10 okanye eli-15 eyadlulayo, utshintsho luyinto enkulu. Olu luhlu lwayo yonke i-algorithm yokuhlaziya eyenzelwe ukufundwa okunomdla.
Ukuhlalutya intsebenzo yakho ye-SEO kuphucula iwebhusayithi yakho kwaye kukunceda ukuba usabele ekutshintsheni. Kubalulekile kuye nabani na ofuna ukuya kwinqanaba eliphezulu kwaye uhlale apho.
Ke ungayihlalutya njani i-SEO?
Iindlela ezi-6 eziphambili zokuhlalutya intsebenzo yakho ye-SEO
Uhlalutyo olunentsingiselo lwentsebenzo yakho luphumle kwimigaqo emithandathu engapheliyo ehlala ihleli ngokuhlala njalo kwimbali ye-SEO-amanqaku enza isiseko seSemalt Analytics. Makhe sijonge nganye nganye.
Xa umsebenzisi echwetheza igama okanye ibinzana kuGoogle, oku kuye kungamandla okuqhuba emva kophando. Ngokuqinisekileyo, uGoogle unokuhlalutya indawo yomsebenzisi, okanye iprofayili yomntu ngamnye abayakhileyo iminyaka, kodwa olu lwazi longeza nje ityiwa nepepile ekukhangeleni. Igama eliphambili sisisitya esiphambili.
Xa iGoogle iphosa umnatha wayo kwiWebhu eBanzi yeHlabathi ukukhangela la magama aphambili, ngaba iwebhusayithi yakho iya kubanjwa? Ngaba uyawazi onke amagama aphambili afanelekileyo ekufuneka iwebhusayithi yakho inike iimveliso ozithengisayo kunye nomziveliso okulo? Ukuba uliziko lomthetho losapho eLondon, ngaba ubonakalisa ngenxa 'yomthetho wosapho eLondon'? Ukuba uyivenkile ye-pizza eBrooklyn, ngaba ubonakalisa iziphumo 'zeBrooklyn'? Le yimizekelo esisiseko yokubonisa ingcinga; Uhlaziyo lwegama eliphambili kunye nokwenza nzulu ngakumbi kubunzulu.
Uhlalutyo lwegama eliphambili luchonga amagama aphambili ekufuneka ujonge kuwo kunye nalapho anokufakwa khona kwiwebhusayithi yakho. Ukubeka amagama aphambili kwindawo ebonakalayo ephezulu njengezihloko kunye nemethadatha iya kuqinisekisa ukuba iinjini zokukhangela ziyazibona.
Kwiintsuku zokuqala zokukhangelwa kwe-intanethi, uGoogle wayefuna indlela yokuqinisekisa umgangatho weziphumo zabo. Baye baqonda ukuba ngokuxhomekeka ngokupheleleyo kumagama aphambili baya kubona i-webhusayithi ' yokufaka amagama angundoqo'-ukubeka amagama abalulekileyo naphi na apho banakho kwindawo yabo ukuze benyukele phezulu kwizikhundla. Ke beza nesisombululo sobulumko: bahlolisisa amakhonkco.
Ukucingisisa kwabo kwakulula: amakhonkco angaphezulu avela kwimithombo yangaphandle eya kwiwebhusayithi, ekumgangatho ophakamileyo ukuba yiwebhusayithi. Yisizathu sokuba usoloko uyibona iWikipedia phezulu kukhangelo-abayikhathalelanga ngokukodwa indlela yokusetyenziswa kwamagama aphambili, kodwa ngokuthembekileyo njengomthombo wolwazi othembekileyo we-intanethi, ezinye iiwebhusayithi ziqhagamshela kwi-Wikipedia ngalo lonke ixesha, zikhulisa kakhulu ukuqinisekiswa kwesiza . Ukuba awukawuboni, ndaqhagamshela kwinqaku leWikipedia kumhlathi apha ngasentla.
Ukwakha ikhonkco kudlala indima ephambili kwi-SEO. Ukuhlalutya amakhonkco akho kwiwebhusayithi, ngaphakathi nangaphandle, kubalulekile ekuqondeni ukuba 'ihlonitshwe' njani iwebhusayithi yakho ziinjini zokukhangela. Umxholo uhlala udlala indima ephambili ekuphuculeni intsebenzo yakho, njengoko kufuneka unike ezinye iiwebhusayithi isizathu sokwenyani sokunxibelelana nawe.
Ngaba iyakhiwa njani iwebhusayithi yakho? Iinjini zokukhangela zithumela 'abakhweli bewebhu' abacwangcisa ngokukhangela kwi-intanethi kunye nezalathisi zomxholo wayo. Ukulula ukuqokelela ulwazi oluyimfuneko yinto ye-SEO.
Yicinge njengohambo lokuya ezivenkileni. Kumkhweli wewebhu onje ngeGooglebot , iwebhusayithi eyakhiwe kakuhle iya kufana nokubrawuza Ivenkile enkulu-yonke into igcinwe kakuhle, ibhalwe ngokucacileyo kwaye ibekwe kwindawo ekulula ukuyiqonda. Iwebhusayithi eyakhiwe kakubi ifana nokuthenga kwigaraji ethengiswayo-akukho ntlangano, zelebheli, kunye nezinto ezingathandekiyo ezilahliweyo naphina.
Uhlalutyo lwewebhusayithi lugxile ekubuyiseleni iwebhusayithi yakho. Kukunceda ukuba uqonde ukuba umkhweli wewebhu unokuhamba ngokulula njani kwindawo yakho ukufumana ulwazi oludingayo. Ikubonelela ngoluhlu lwezinto onokuthi uphucule kuzo.
Waziwa kangakanani, uyathandwa kwaye uyithenjwa kangakanani uphawu lwakho, hayi ngokombono kaGoogle, kodwa emehlweni abathengi abanokubakho?
Ukubek'esweni uphawu olubanzi kunikezela ngombono opheleleyo wobukho bakho kwi-intanethi-akujongi nje kwiwebhusayithi yakho, kodwa kujongwa kwakhona njengabalinganisi bakaGoogle, uFacebook, Trustpilot kunye noGlassdoor, aze ahlalutye intsebenzo iyonke kwi-intanethi yophawu lwakho. Kukunceda ukuba uqonde indlela uphawu lwakho olujongwa ngayo ngaphandle kwaye libonisa iindlela onokuthi uphucule ngazo olo luvo. Ezi zibakala zikunceda ekuqulunqeni umgaqo-nkqubo wokubambisana osebenzayo.
Yithi ufumana amanqaku angama-70% kuvavanyo. Ngokuqinisekileyo, kudlulile, kodwa iziphumo azithethi lukhulu de ube wazi kakuhle ukuba wonke umntu wenze njani na. Ngokukwanjalo, awuyazi ngokuqinisekileyo into yokuba uhlalutyo lwakho lwe-SEO luthetha ntoni de ube uzithelekisa nabantu okhuphisana nabo.
Uhlalutyo lomthengi usebenzisa ubuchwephesha obufanayo njengasentla ukuqonda indlela inyathelo lakho kwidijithali elinyuka ngayo xa usiya kukhuphisana nabo ngqo. Ijonga ukuba zikuphi ngokwangoku eziinkampani, nokuba zenza ntoni ukuze zifike apho.
Ke ngoku ukuya kumnyhadala. Nje ukuba uqokelele konke kolu hlaziyo kunye, lixesha lokuba wenze ulwazi lwakho. Eyona njongo iphambili ye-SEO kukufumana indawo yakho yewebhusayithi iphakame kwiinjini zokukhangela amagama aphambili, ke xa sele uhlalutye nganye yeyona nto inegalelo, lixesha lokuhlalutya iziphumo zemizamo yakho.
Uhlalutyo oluhle lwegama eliphambili liya kuba rhoqo (ngokufanelekileyo lenziwa yonke imihla) kwaye lubanzi. Iya kujonga indawo yakho kwiinjini zokukhangela ezininzi, kwaye ikunike ulwazi olufunekayo ukuze uphucule umgangatho wakho. Iya kuzibonakalisa njengexabisekileyo ngokukutyhalela phezulu kwizikhundla ngaphezulu kwexesha.
Sebenzisa i-Semalt Analytics ukukhangela ukusebenza kwe-SEO
I-Semalt Analytics iphawula zonke iibhokisi ezingasentla. Isixhobo sohlalutyo lwe-webmaster yovavanyo lobuncinci, yenzelwe ukukunika umbono ocacileyo wemeko yakho yangoku ye-SEO kunye nokuvelisa ukungakuxabisi okuza kukubona unyuka kwizinga lokukhangela ngamagama aphambili afanelekileyo.
Ukuqokelela idatha yewebhusayithi
Ukuvelisa ingxelo eneenkcukacha malunga nesikhundla se-SEO sakho kunye nabo ukhuphisana nabo
Ukubonelela ngoluhlu lwamagama aphambili aya kukwenza ukuba indawo yakho yandise kwaye kwandise ukugcwala kwabantu
Ukuxhasa iinzame ze-SEO kwiinjini zokukhangela ezihlanu ezahlukeneyo
Ukuhlalutya imigangatho ngexesha langempela kunye nokuhambisa ingxelo ye-SEO yemihla ngemihla
Ukunikezela umphathi oza kujonga kwinkqubo yakhe ukuze alawule yonke inkqubo
Ukuhlaziywa kweSemalt kukuhambisa ulwazi. Into oyenzayo ngezi zibakala kukuwe. Unokwenza kubo ngokwakho, okanye unxibelelane nengcali ye-Semalt SEO, onokukukhokela ngokusebenzisa olu lwazi lutsha.
Ukusebenza kweinjini yokukhangela kwidabi eliqhubekayo. Iziphumo zegoli zihlala zihamba, kwaye abakhuphiswano bahlala bejonge ukukufumana. Kodwa ngokuqonda imigaqo yomdlalo, kunye nokusebenzisa isixhobo esikrelekrele esikunika elona thuba lokuphumelela, uya kuba nako ukuphumelela uloyiso lomlo.
Ke kutheni ulindile? Kusimahla ukuba uqalise nge-Semalt Analytics- unokongeza iwebhusayithi yakho kwi-PRO Hlaziya ngoku ngaphandle kokuhlawula isenti, kwaye ufumanise ngqo ukuba ishishini lakho lingayifikelela njani impumelelo ye-SEO.